Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed oo goordhow gaaray Garowe – – AfmoNews
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed oo goordhow gaaray Garowe –
Ra’iisal wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wafdi uu hoggaaminaayay ayaa goor dhow gaaray magaalada Garowe.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa Garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay, Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahidi Guuleed iyo wafdigiisa.
Waxaa sidoo kale Garoowe gaaray qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo masuuliyiin kale oo badan.
Waxaa la filayaa inay gaaraan magaalada Garowe saacadaha soo socda wufuud kale oo qeyb galaya shirka oo looga hadli doono Xasilinta Dalka amni ahaan, Dhameystirka Dastuurka, Qabashada Doorasho qof iyo cod ah Yagleelida Nidaam Federaal oo shaqeynaya.
Previous articleFaahfaahin ka soo baxaysa toogasho ka dhacday Muqdisho